Crane operator field field - သင်သည်အလုပ်တစ်ခုရှာနေလျှင် [Genbers]
Crane အော်ပရေတာလုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း / အချိန်ပိုင်းအလုပ်အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း
【9件掲載】クレーンオペレーターの現場求人・バイト募集。建設・土木・建築・運輸・警備の仕事を中心に様々な職種を探せます。手に職をつけて自分のキャリアを磨いていこう！有限会社　大和重機,株式会社　エース工業などクレーンオペレーターの現場求人を掲載。
9 ကိစ္စရိန်းအော်ပရေတာအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်။ (၁-၃၀)
[တစ်ပတ်လျှင် ၂ ရက် OK ◎အချိန်ပိုအလုပ်နီးပါးမရှိ] ပုဂ္ဂလိကဖြည့်ဆည်းမှု။ [နေ့စဉ်ငွေပေးချေမှု OK ★နေ့စဉ်လုပ်ခ ၁၃၀၀၀ ယန်းစတင်] မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ hosp ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုဖြင့်သင်ဝင်ငွေရနိုင်သည်။
 ဖျက်သိမ်း / သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်း  အကြီးစားစက်ကိရိယာ
ကူဂါဂိုနှင့်တိုကျိုရှိ Saitama နှင့်တိုကျိုရှိအခြားဆိုဒ်များ (နေရာများစွာရှိသည်။ ) [Place] ၄၂ Shimoakasaka, Kawagoe City, Saitama Prefecture ...
Ace Industry Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ဟုတ်လား
[အကြီးစားစက်ပစ္စည်းအော်ပရေတာ၊ ရေပိုက်သမား၊ အမျိုးမျိုးသော ၀ န်ထမ်းများ] စီးပွားရေးတိုးချဲ့ခြင်းကြောင့်အမြောက်အများတိုးပွားလာသည်။အသက်အရွယ်နှင့်အတွေ့အကြုံအရေးမကြီးပါ! အဆောင်ကိုအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒေသခံfromရိယာများမှလျှောက်လွှာများကိုလည်းကြိုဆိုပါသည်။
(၁) အကြီးစားစက်ကိရိယာ / ရေပိုက်သမား (၂) အလုပ် ၀ န်ထမ်း
(၁) နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်း ~ (၂) နေ့စဉ်လစာ ၁၀၀၀၀ ယန်း ~ * လေ့ကျင့်မှုကာလရှိသည် * ငွေသွင်းစနစ်ရှိပါသည်
Rokukata-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba (အနီးဆုံးဘူတာရုံ: Toga station) မှမြို့ပြတစ်ခုလုံးသို့
Mirai Co. , Ltd. ၏အလုပ်များဟုတ်လား
Kanto Kouki ကုမ္ပဏီလီမိတက်
လူငယ်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း - ဆယ်ကျော်သက်များ၊ ဘွဲ့ရအသစ်များ (မိဘ၏ခွင့်ပြုချက်)ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်အကိုင်အပြောင်းလဲနေတဲ့သူတွေကိုကြိုဆိုကြသည်! ★☆★လုံခြုံသောလစာ★★☆★မြေကြီးလုပ်ငန်း - ၀ န်ဆောင်မှု★မိန်းမများအတွက်လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်သော ၀ င်ငွေအတွက်ပုံမှန်လစာစနစ်★မိုးရွာသောအားလပ်ရက်များနှင့်စောစီးစွာမြင့်တက်ခြင်း★ - 10R ဆောင်ဆောင် complete အပြီး - ♪ပရိဘောဂအသုံးအဆောင်များ☆ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်ခြင်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း (မြေကြီးလုပ်ငန်း) / အထွေထွေအလုပ်များ [ကုမ္ပဏီ] ၁ ။ ပုံဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ◇စိတ်အားထက်သန်သောအော်ပရေတာများကိုကြိုဆိုပါသည်။ ၂။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ◇ပုံဆောက်လုပ်ရေးနေရာအတွေ့အကြုံရှိသူများကြိုဆိုကြသည်။ အလုပ်သင်များကိုလည်းကြိုဆိုကြသည်။
ပုံဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်း★★★ယုံကြည်စိတ်ချရသောလစာ★★★★☆မြေကြီးသားလုပ်သားများ☆အော်ပရေတာ (အလုပ်သင်ကြိုဆိုသည်) ပုံသေလစာစနစ်◆လစဉ်လစာ ၂၅၀,၀၀၀ - ၄၀၀,၀၀၀ ယန်း * ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်ကာလ ... ★
တိုကျို၊ ကန်နာဂါ၊ ဆိုင်းတာမာစသည်တို့။ ကန်တို ၁ ယန်း * တိုက်ရိုက် / တိုက်ရိုက်ပြန်အမ်းဖြစ်နိုင်သည်
Kanto Koki Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Improv Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ဟုတ်လား
Hikichigumi Co. , Ltd.ဟုတ်လား
Sunray Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Tojuki Co. , Ltd.
ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးသက်သေပြနိုင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၅၀ ကတည်ထောင်ခဲ့သောတည်ငြိမ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခု!သင်၏အရည်အချင်းကို အသုံးချ၍ ပရိုဖိုင်းပုံဆွဲသူဖြစ်လာရန်လိုသလား။သင်လှုံ့ဆော်ခံရလျှင်ချက်ချင်းလက်ခံပါ။ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ခေါ်ပါ
လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ၀ န်ထမ်းများ (ပုံဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ)
လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ၀ န်ထမ်းများ (ပုံဆောက်လုပ်ခြင်း) နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ ယန်း ၂၀၀၀၀ ယန်းအလုပ်သင် ၁၀၀၀၀ ယန်း - * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်။
443 Gake, Yashio City, Saitama Prefecture, Yashio City, Misato City, Soka City, Saitama Prefecture နှင့် Matsudo City, Kashiwa City, Chiba Prefecture, တိုကျို၏ရပ်ကွက် ၂၃ ခုတွင်ဗဟိုပြုသည်။
Tojuki Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
အဆိုပါရိန်းခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့်အမြင့်ခြားနားချက်နှင့်အတူသူတို့ကိုနေရာသယ်ဆောင်။အလုပ်သည်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်အန္တရာယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်မတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်ရန်သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ရိန်းအမျိုးအစားများစွာရှိပြီးရည်ရွယ်ထားသောအသုံးအနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသောအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်။ထို့အပြင်လိုအပ်သောအရည်အချင်းများကိုကိုင်တွယ်ရမည့်ဝန်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ မိုဘိုင်းရိန်းစစ်ဆင်ရေး၌ပင်၎င်းကို“ အထူးပညာရေး (၁ တန်ထက်နည်းသည်)”၊ “ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း (၅ တန်ထက်နည်း)” နှင့်“ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်” ဟူ၍ ခွဲထားသည်။လိုအပ်သည့်အတိုင်းယူကြပါစို့။ထို့အပြင်အများပြည်သူသုံးလမ်းမများသို့ဆိုက်သို့သွားသောအခါရိန်းပေါ် မူတည်၍ ပုံမှန်၊ ကြီးမားသောသို့မဟုတ်အထူးကြီးမားသောမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုအပ်သည်။သင့်မှာအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင် slinging skill class ကိုအရင်လေ့လာပါ။
Matsudo / Kashiwa / Ryuyama (2)
လူမှုဖူလုံရေးအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသည် (8)
သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေမှာ "ချီစက်အော်ပရေတာဒါဟာ "ဖြစ်ပါတယ်။